Kana uchida kudiwa, rudo. - Seneca - Quotes Pedia
Kana iwe uchishuva kudiwa, rudo. - Seneca
Rudo ndirwo rwunonyanya kukosha muhupenyu hwedu, pamwe chete nemufaro. Izvi zviviri zvinhu zvakabatana kune mumwe nemumwe. Kana iwe usingakwanise kuda mumwe munhu, haugone kuwana mufaro. Kana iwe uchida kuwana mufaro, unofanirwa kuparadzira rudo nepamunogona napo.
Isu tinoziva kuti dzimwe nguva zvakanyanyisa kuda munhu nekuda kwemamiriro ezvinhu. Nekudaro, kana iwe uchigona kuda mumwe munhu, pane mukana wekuti achapora. Zvakanaka, iwe unofanirwa kuziva kuti rudo ndiye mutapuri akanaka kwazvo munyika ino nerudo parutivi rwako unogona kuita kuti vanhu vafare pamwe nekugutsikana.
Uyezve, iwe uchagamuchira mufaro uye kugutsikana. Zvakanaka, ndechimwe chezvinhu izvo isu vazhinji tinoda. Pasina rudo, hapana kuwanikwa muhupenyu hwedu. Saka, pese paunenge uchiwana mukana wekuda mumwe munhu, haufanire kugara kure neizvozvo.
Chinhu chimwe chete chaunofanira kugara uchifunga ndechekuti kana uchida kugamuchira rudo kubva kune mumwe munhu, unofanirwa kuvada futi. Pasina kupa rudo, haugone kutarisira rudo kubva kune mumwe munhu. Icho chinhu chatinofanira kuchinjana nemumwe. Saka usamborega kuda munhu.
Nekudaro, ichava sarudzo yakanakira iwe kana ukasatarisira chero chinhu kubva parudo. Kuda munhu uye kutarisira rudo mukudzoka hachisi chinhu chaunofanirwa kuita. Kana munhu akatadza kukupa rudo mukudzoreredza mwoyo wako. Asi iwe haufanirwe kunetseka nezve chero chinhu sezvo iri mutemo wehupenyu wekuti kana ukapa rudo kune mumwe munhu unozowana.
Saka, iwe unogona kuona kuti rudo ndirwo rwunonyanya kukosha muhupenyu hwedu. Izvo zvine basa rugare rwedu, mufaro, uye kugutsikana. Kutaura chokwadi, rudo chimwe chinhu chaunofanira kukoshesa. Ichakupa iwe ndangariro dzaunogona kuchengeta hwako hwese hupenyu.
Akanaka Quotes PaRudo
Yakadzika Quotes Pamusoro Perudo
Yakakurumbira Love Quotes
Makotesheni Akanaka PaRudo
Kukurudzira Rudo Quotes
Kukurudzira Quotes Nezve rudo
Rudo Uye Ukama Quotes
Love Mifananidzo ine Quotes Uye Kutaura
Love Quotes Nemifananidzo
Hukama hwehukama Quotes
Kuda Pfungwa Mifananidzo
Quotes About Hupenyu Uye Rudo
Mapfupi erudo maKotes
Zvidimbu Zvepfupi Kutaura
Short Quotes Pamusoro Perudo
Yechokwadi Rudo Mateki Nemashoko
Wise rudo Quotes
Hupenyu, kana hwakararama zvakanaka, hwakareba zvakakwana. - Lucius Annaeus Seneca
Hupenyu, kana hwakararama zvakanaka, hwakareba zvakakwana. - Lucius Annaeus Seneca Akabatana Mazwi:
Chinhu chakakosha hachigone kukwenenzverwa pasina kukakavara, kana munhu akagadziridzwa pasina kuyedzwa. - Lucius Annaeus Seneca
Chinhu chakakosha hachigone kukwenenzverwa pasina kukweshera. Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti kuitira kukwenya…